हरेक विबाहित महिलाले थाहा पाउनुहोस : कतै तपाईलाई यस्तो समस्या त छैन् : गर्भवति भएको बेलामा शारिरिक सम्परक गर्न हुन्छ कि हुदैन ! - E ALL NEPAL
तीन महिनादेखि सात महिनाका बीचमा बच्चालाई असर नपुर्‍याउने आसनमा मात्र सम्भोग गर्नुपर्छ। महिला माथि र पुरुष तल बसेर गर्ने आसन, महिलालाई पछाडिबाट सम्भोग गर्ने आसन गर्भवती महिलालाई लाभप्रद हुनसक्छ। यस बेला कन्डमको प्रयोग गरेर यौन सम्पर्क राख्दा भ्रूणमा इन्फेक्सन हुन दिँदैन। योनीबाट रगत बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने आदि भएमा यौन सम्पर्क तत्काल रोक्नुपर्छ। सरसल्लाह एवं समझदारीमा मात्र यौन सम्पर्क राख्नुपर्छ। यस बेला पुरुषले सावधानीपूर्वक यौन सम्पर्क राख्नुपर्छ। उत्तेजनामा आएर ख्याल नगरी कदापि सम्बन्ध राख्नुहुँदैन।
पुरुष कुनै पनि हालतमा सभ्भोग गर्ने मनस्थितिमा प्रस्तुत भयो भने बच्चालाई चोट पुगेर गर्भ तुहिन पनि सक्छ। गर्भावस्थामा उत्तेजनामा आएर मुख मैथुन, गुदा मैथुन गर्नु राम्रो हुँदैन। सकेसम्म कम उत्तेजनामा र बढी प्रेमपूर्ण भएर यौन सम्पर्क राखेको राम्रो हुन्छ। यदि योभन्दा पहिलेको गर्भ तुहिएको हो भने यस वर्ष चाहिँ अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ। गर्भवती महिलाको हेरविचार गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा चिकित्सकको सल्लाहविना तीन महिनादेखि सात महिनाका बीचमा पनि यौन सम्पर्क राख्नु हँुदैन। यो कुरामा अत्यन्त संवेदनशील भएर ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ। गर्भधारणपछि पनि तुरुन्तै यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन। अपरेसन गरेर बच्चा जन्माएको वा योनी च्यातिएर सिजरिङ गरेको हो भने चिकित्सकको परामर्शविना यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन।
-डा. सुबोधकुमार पोखरेल नागरिक बाट
बगीरहेको नदी ४ दिनमा नै एक्कासी गायव भएपछि हंगामा